လုခ်ရှောရဲ့ ဦးခေါင်းဒဏ်ရာက စိုးရိမ်စရာအနေအထား မရှိတော့ပါဘူး
ဦးခေါင်းဒဏ်ရာက ပြန်သက်သာလာပြီဖြစ်တဲ့ လုခ်ရှော Luke Shaw
9 Sep 2018 . 2:26 PM
Nations League ပွဲအဖြစ် စပိန်အသင်းနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ဦးခေါင်းဒဏ်ရာ ရခဲ့တဲ့ အင်္ဂလန်အသင်း နောက်ခံလူ လုခ်ရှော Luke Shaw ဟာ အခြေအနေ ပြန်ကောင်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ လုခ်ရှောဟာ ဒုတိယပိုင်းပွဲအစမှာ ပြိုင်ဘက်နောက်ခံလူ ကာဗာဟာလ် Carvajal နဲ့ ဘောလုံးခေါင်းယှဉ်တိုက်တာကနေ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး သတိလစ်သလို ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဆေးအဖွဲ့ဝင်တွေက အောက်စီဂျင်ပေးခဲ့တဲ့အပြင် (၇)မိနစ်လောက် ကြာတဲ့အထိ ရှေးဦးသူနာ ပြုစုခဲ့ရတယ်။
လုခ်ရှောကို ကွင်းထဲကနေ ထမ်းစင်နဲ့ သယ်ယူသွားခဲ့ရပြီး သူ့အနေအထားက စိုးရိမ်စရာဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ အခြေအနေ အားလုံးတည်ငြိမ်သွားပြီလို့ BBC သတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့တယ်။
လုခ်ရှောက “ကျွန်တော့်ကို အားပေးနှစ်သိမ့်ခဲ့ကြတဲ့အတွက် အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခု ကျွန်တော့်အခြေအနေ ကောင်းမွန်လာပါပြီ။ ကျွန်တော်က Fighter တစ်ဦးဖြစ်လို့ မကြာခင် ပြန်လာနိုင်မှာပါ”ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ Twitter စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ အသက်(၂၃)နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ လုခ်ရှောဟာ စပိန်နဲ့ပွဲမှာ ၂၀၁၇၊ မတ်လနောက်ပိုင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အင်္ဂလန်အသင်းအတွက် ပွဲထွက်ကစားခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဖွင့်ဂိုးကို ရပ်ရ်ှဖို့ဒ် Rashford သွင်းယူနိုင်အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့သူပါ။ ဒါပေမဲ့ အင်္ဂလန်အသင်းကတော့ ကံကောင်းခဲ့ပါဘူး။
စပိန်အသင်းက ဆာအူလ် Saul ၊ ရိုဒရီဂို Rodrigo တို့က ချေပဂိုး၊ အနိုင်ဂိုးတွေ သွင်းယူပြီး ၀င်ဘလေကွင်းမှာ အင်္ဂလန်အသင်းကို အနိုင်ယူခဲ့ပါတယ်။
ဦးခေါငျးဒဏျရာက ပွနျသကျသာလာပွီဖွဈတဲ့ လုချရှော Luke Shaw
Nations League ပှဲအဖွဈ စပိနျအသငျးနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ပှဲမှာ ဦးခေါငျးဒဏျရာ ရခဲ့တဲ့ အင်ျဂလနျအသငျး နောကျခံလူ လုချရှော Luke Shaw ဟာ အခွအေနေ ပွနျကောငျးလာပွီဖွဈပါတယျ။ လုချရှောဟာ ဒုတိယပိုငျးပှဲအစမှာ ပွိုငျဘကျနောကျခံလူ ကာဗာဟာလျ Carvajal နဲ့ ဘောလုံးခေါငျးယှဉျတိုကျတာကနေ ဒဏျရာရရှိခဲ့တာဖွဈပွီး သတိလဈသလို ဖွဈနတေဲ့အတှကျ ဆေးအဖှဲ့ဝငျတှကေ အောကျစီဂငျြပေးခဲ့တဲ့အပွငျ (၇)မိနဈလောကျ ကွာတဲ့အထိ ရှေးဦးသူနာ ပွုစုခဲ့ရတယျ။
လုချရှောကို ကှငျးထဲကနေ ထမျးစငျနဲ့ သယျယူသှားခဲ့ရပွီး သူ့အနအေထားက စိုးရိမျစရာဖွဈခဲ့ပမေယျ့ အခုအခြိနျမှာတော့ အခွအေနေ အားလုံးတညျငွိမျသှားပွီလို့ BBC သတငျးဌာနက ဖျောပွခဲ့တယျ။
လုချရှောက “ကြှနျတေျာ့ကို အားပေးနှဈသိမျ့ခဲ့ကွတဲ့အတှကျ အားလုံးကို ကြေးဇူးတငျပါတယျ။ အခု ကြှနျတေျာ့အခွအေနေ ကောငျးမှနျလာပါပွီ။ ကြှနျတျောက Fighter တဈဦးဖွဈလို့ မကွာခငျ ပွနျလာနိုငျမှာပါ”ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ Twitter စာမကျြနှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယျ။ အသကျ(၂၃)နှဈအရှယျရှိပွီဖွဈတဲ့ လုချရှောဟာ စပိနျနဲ့ပှဲမှာ ၂၀၁၇၊ မတျလနောကျပိုငျး ပထမဆုံးအကွိမျအဖွဈ အင်ျဂလနျအသငျးအတှကျ ပှဲထှကျကစားခှငျ့ရခဲ့တာဖွဈပွီး အဖှငျ့ဂိုးကို ရပျရျှဖို့ဒျ Rashford သှငျးယူနိုငျအောငျ ဖနျတီးပေးခဲ့သူပါ။ ဒါပမေဲ့ အင်ျဂလနျအသငျးကတော့ ကံကောငျးခဲ့ပါဘူး။
စပိနျအသငျးက ဆာအူလျ Saul ၊ ရိုဒရီဂို Rodrigo တို့က ခပြေဂိုး၊ အနိုငျဂိုးတှေ သှငျးယူပွီး ဝငျဘလကှေငျးမှာ အင်ျဂလနျအသငျးကို အနိုငျယူခဲ့ပါတယျ။
Rashford ရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်သွင်းဂိုးမှတ်တမ်းကောင်းကို လိုက်မီဖို့ ရှိနေတဲ့ Tammy Abraham
by Naing Linn . 12 hours ago
ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ ဘယ်အသင်းဗိုလ်စွဲမလဲ (၁)
by Ko Kyue . 13 hours ago
Romelu Lukaku ကို လူမျိုးရေးခွဲခြားခဲ့လို့ ရုပ်သံတင်ဆက်ခွင့် အပိတ်ခံခဲ့ရတဲ့ Passirani
by Naing Linn . 13 hours ago
အသက်ကငယ်ငယ် စံချိန်ကကြွယ်ကြွယ် (သို့) Anssumane Fati
by Ko Kyue . 15 hours ago
ပွဲမပြီးခင် အောင်ပွဲမခံပါနဲ့ဦး . . Matteo Guendouzi
by Naing Linn . 17 hours ago